Fomba hivavaka amin'Andriamanitra araka ny Baiboly ▷ ➡️ Mahita an-tserasera ▷ ➡️
Fomba hivavaka amin'Andriamanitra araka ny Baiboly
Fomba hivavaka amin'Andriamanitra araka ny Baiboly. Tsy maintsy mivavaha am-pinoana, mivavaka amin'Andriamanitra, mampiasa ny tenintsika manokana, miaiky ny fahotantsika, miaraka am-po feno fankasitrahana ary manome ny zavatra rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra.
1 Fomba fivavaka amin'Andriamanitra araka ny Baiboly tsikelikely
2 Fomba 7 hivavahana araka ny Baiboly
2.1 1. Minoa fa hihaino Andriamanitra
2.2 2. Atombohy amin'ny filazanao zavatra tsara momba an'Andriamanitra
2.3 3. Anontanio Andriamanitra amin'ny teninao manokana
2.4 4. Mibaboka ary mangataha famelana ny fahotanao
2.5 5. Apetraho eo an-tanan'Andriamanitra ny tenanao
2.6 6. Misaora amin'ny zavatra tsara
2.7 7. Lazao hoe "amin'ny anaran'i Jesosy"
3 Aza mivavaka raha tsy rehefa mila izany ianao
4 Rahoviana no mivavaka
Fomba fivavaka amin'Andriamanitra araka ny Baiboly tsikelikely
Tsy misy fomba tokana ahafahana mivavaka marina fa asehon'ny Baiboly Fitsipika 7 izay mampianatra ny fomba fivavahana amin'Andriamanitra:
Minoa fa mihaino ny vavakao Andriamanitra.
Milaza zavatra tsara momba an 'Andriamanitra.
Mampiasà teninao manokana.
Mibaboka ny fahotanao ary mangataha famelana.
Lazao amin'Andriamanitra fa matoky azy ianao na inona na inona valiny.
Misaotra noho ny zavatra tsara amin'ny fiainanao.
Mivavaha manao hoe "amin'ny anaran'i Jesosy."
Fomba 7 hivavahana araka ny Baiboly
1. Minoa fa hihaino Andriamanitra
Minoa fa hihaino Andriamanitra
Alohan'ny hanombohanao dia tadidio izany Andriamanitra tia antsika ary mihaino ny vavaka rehetra ataontsika. Manana ny hery rehetra izy ary maniry ny tsara indrindra ho antsika. Rehefa mivavaka isika dia tsy maintsy mino an'izany. Izay mino dia hahita ny valiny avy amin'Andriamanitra.
Ary Jesosy namaly azy ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa fa raha manam-pinoana ianareo ka tsy miahanahana, dia tsy ny aviavy ihany no hataonareo, fa raha izao no lazainareo amin'ity tendrombohitra ity: Mialà, mandry amin'ny ranomasina , ho vita izany.
Ary na inona na inona angatahinao amin'ny vavaka, inoana dia ho azonao.
Matio 21: 21-22
2. Atombohy amin'ny filazanao zavatra tsara momba an'Andriamanitra
Atombohy amin'ny filazanao zavatra tsara momba an'Andriamanitra
Amin'ny fomba tsotra, lazao amin'Andriamanitra fa ekenao fa izy no Andriamanitra mahery indrindra, fa izy no mpanjaka ary miankina aminy daholo ny zava-drehetra. Andriamanitra no ivavahana. Ohatra:
Tompo ô, mpanjaka ianao.
Ray ô, tsara ianao.
Andriamanitra ô, tiako ianao satria mifehy an'izao rehetra izao ianao.
Andriamanitra ô, lehibe sy mahery ianao.
3. Anontanio Andriamanitra amin'ny teninao manokana
Anontanio Andriamanitra amin'ny teninao manokana
Aza mampiasa raikipohy na fehezanteny tsianjery. Ataovy am-pinoana sy amin'ny fahatsorana ny fangatahanao amin'Andriamanitra. Fantany isika ary tiany isika amin'ny maha-izy antsika, tsy ho talanjona izy raha sahirana isika miteny. Lazao azy ny zavatra tsapanao. Miresaha Aminy. Misy zavatra azonao lazaina amin'Andriamanitra amin'ny teninao manokana:
Ampio aho hahazo asa tompoko.
Nanasitrana ny rahavaviko marary i Dada.
Andriamanitro ô, nahoana no malahelo aho? Mila anao aho.
Tompoko, mila mandalo ilay fitsapana aho, ampio aho.
Dada, hanao ahoana izao aho? Ampio aho.
4. Mibaboka ary mangataha famelana ny fahotanao
Mibaboka ary mangataha famelana ny fahotanao
Aza mangarahara miaraka amin'Andriamanitra. Izy efa mahalala ny zava-drehetra, fa te handre ny fonao nibebaka. Lazao amin'Andriamanitra izay nataonao ary mangataha famelana. Ohatra:
Nandainga aho. Azafady tompoko !.
Tompoko, mila ny famelana ny heloko ianao. Nandika izany tamin'ny fitsapana aho.
Dada, nieritreritra zavatra ratsy aho, mamelà ahy.
Andriamanitro ô, tsy nahomby indray aho, mamela ny fahotako.
5. Apetraho eo an-tanan'Andriamanitra ny tenanao
Apetraho eo am-pelatanan'Andriamanitra ny tenanao
Jesosy dia nampianatra antsika hiteny hoe "Hatao anie ny sitraponao." Midika izany fa rehefa mivavaka ianao Zava-dehibe ny fahafantaranao fa mifehy Andriamanitra. Lazao, ohatra:
Tompoko, tiako hitranga ireo zavatra ireo, saingy fantatro fa Andriamanitra ianao ary fantatrao izay mahasoa ahy indrindra.
Mila izany aho, Tompoko, fa ataovy izay heverinao fa tsara indrindra. Matoky Anao aho.
Mangetaheta valiny aho, Tompoko. Fa na dia tsy mitranga aza izany dia fantatro fa tia ahy ianao ary hisy zavatra tsara kokoa ho avy.
Raiko, raha tsy ny tsara indrindra ho ahy ny zavatra angatahiko aminao dia avelao hanao araka izay itiavanao azy
6. Misaora amin'ny zavatra tsara
Misaora amin'ny zavatra tsara
Ny mivavaka dia tsy hoe mangataka amin'Andriamanitra fotsiny. foana tsara ny misaotra am-bavaka noho izay nataon'Andriamanitra ho anao. Eritrereto ny zavatra tsara ary misaora an Andriamanitra noho izany.
Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anao ao amin'i Kristy Jesosy.
1 Tesaloniana 5:18
7. Lazao hoe "amin'ny anaran'i Jesosy"
Lazao amin'ny anaran'i Jesosy
Tsy raikipohy mazika io, fa Ny famaranana ny vavaka ataonao amin'ny "amin'ny anaran'i Jesosy" dia afaka manampy anao hahatsiaro fa noho i Jesosy no ahafahantsika mivavaka amin-toky amin'ny Ray. Jesosy dia nampianatra antsika hangataka ny zavatra rehetra amin'ny anarany. Tsy mila any amin'ny farany akory. Nefa tadidio: ny vavaka henoin'Andriamanitra dia tsy azo atao afa-tsy amin'i Jesosy.
Aza mivavaka raha tsy rehefa mila izany ianao
Ny vavaka dia tsy tokony ho zavatra mitranga indray mandeha, fa amin'ny fotoan-tsarotra ihany. Vavaka mahery amin'ny ankapobeny avy amin'ny fomba fivavahana. Noho izany, mivavaka andriamanitra isan'andro. Imbetsaka isan'andro. Miresaka amin'Andriamanitra. Vonona ny handany fotoana miaraka aminao izy. Hitombo ny finoanao ary hiova ny fiainanao.
Raha te hivavaka tsaratsara kokoa aza ianao dia mangataha amin'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly afaka mangataka amin'Andriamanitra isika mba hampianatra antsika hivavaka ary mamaly Izy. Mivavaha amin'Andriamanitra manao hoe: Tompoko, ahoana no fomba hivavahako?
Ary toy izany koa, ny Fanahy no manampy antsika amin'ny fahalementsika; fa tsy tokony fantatsika izay tokony angatahintsika raha mifanaraka aminy, fa ny Fanahy Masina no mifona ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tononina.
Romana 8: 26
Vakio ny vavaky ny Tompo, ohatra, ary Angataho Andriamanitra hanampy anao hivavaka bebe kokoa toa an'i Jesosy. Aza ampiasaina ho raikipohy hamerenana azy, fa ohatra amin'ny fomba firesahana amin'Andriamanitra:
Rainay izay any an-danitra! Hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga ny fanjakanao; Hatao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny haninay isan'andro. Mamelà ny trosanay, tahaka ny namelantsika ny helokay. Aza miditra amin'ny fakam-panahy fa manafaha anay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena ".
Afaka mivavaka amin'ny fomba maro samihafa isika, tsy misy lalàna sarotra sy haingana momba ny fomba fivavahana. Ny mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia tsy voatery ho tsara tarehy na lava hohenoina.
Rahoviana no mivavaka
Milaza izany ny Baiboly tsy maintsy mivavaka amin'ny fotoana rehetra isika. Andriamanitra dia mihaino ny vavaka ataontsika foana, na aiza na aiza misy antsika. Fa koa tsara ny maka fotoana hivavahana irery amin'Andriamanitra. Tahaka ny fanaovana resadresaka akaiky kokoa amin'ny namana iray izany, tsy misy fanelingelenana. Jesosy dia nanandrana nanokana fotoana hivavahana irery foana.
Mivavaha tsy mitsahatra.
1 Tesaloniana 5:17
Niala tany amin'ny toerana foana anefa izy ary nivavaka.
Podemos mivavaka irery na miaraka amina vondrona iray. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa tsy ny hevitry ny olon-kafa. Tsy fihetsika manaitra izany fa an resaka marina amin'Andriamanitra. Ary tsy famerimberenana foana ny teny majika hahatonga zavatra hitranga. Afaka mamerina ny vavakay amin'Andriamanitra isika, saingy tsy tokony avelantsika ho tonga a ny vavaka fanararaotana -poana.
Ary rehefa mivavaka ianao dia aza manahaka ny mpihatsaravelatsihy; satria tian'izy ireo ny mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy eny an-joron-dalana, ho hitan'ny olona; Mampianiana anao aho fa efa nahazo ny valisoany ny TOMPO.
Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efi-tranonao, ary narindrinao ny varavarana, mivavaha amin'ny Rainao, Izay ao amin'ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin'ny mangingina, no hamaly anao eo imasom-bahoaka.
Ary mivavaka, aza mampiasa famerimberenana foana, toy ny Jentilisa, izay mihevitra fa amin'ny resaka ataony dia hohenoina izy ireo.
Aza manao toa azy ireo; satria ny Rainao mahalala izay ilainao, alohan'ny anontanianao azy.
Matio 6: 5-8
Izany no izy! Manantena izahay fa hanampy anao hahatakatra ity lahatsoratra ity ny fomba hivavahana amin'Andriamanitra araka ny Baiboly. Raha izao dia te hahalala ianao ny fomba nampianaran'i Jesosy antsika hivavaka, manohy mizaha Discover.online.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny faran'ny fifandraisana
Hanao ahoana ny fiafaran'izao tontolo izao raha ny Baiboly no jerena